Kashi Villa 1 A British Villa entliziyweni Kasauli - I-Airbnb
Kashi Villa 1 A British Villa entliziyweni Kasauli
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguRachna
Ifakwe kwi-5 acre estate, iKashi Villa inamagumbi amabini kumgangatho ophantsi ojikelezwe yimithi, imbono yeentaba ezigqunywe yikhephu kunye negumbi lokulala kunye negumbi lokuhlala. Kukho i-bukhari yokubetha ukubanda iboleka indawo ikhubalo lehlabathi elidala kunye nentuthuzelo yanamhlanje.
I-Kashi Villa imalunga ne-150 mtrs kude nendawo yokupaka. Kukho amanyathelo abandakanyekayo . Ukuba kukho abantu abadala abangakwaziyo ukuhamba singabakhwelisa ukuya kwi-villain ngemoto yethu. Kusenjalo appx 10 amanyathelo abandakanyekayo
Kukho ii-suites ezintathu kule villa. Ezimbini kumgangatho ophantsi.
Le suite ikumgangatho ophantsi kwaye inegumbi elinye lokulala elinendawo yokuhlala. Indawo yokuhlala nayo inesofa yokutsala enokuthi iguqulwe ibe yibhedi yobukhulu bokumkanikazi kwaye inokwamkela abantwana aba-2 ngokukhululeka.
Ngaphandle kukho iveranda enendawo yokuhlala kunye nengca. Ijikelezwe yimithi emininzi kwaye ungahamba uye emarikeni (1km) kwindlela entle.
Le ndawo inamahektare amahlanu igutyungelwe ziintlobo ngeentlobo zemithi kwaye yiparadesi yabathandi beentaka. Unokubona iintaka ezininzi ngelixa ujikeleze ipropathi.
Ndiyathanda ukusetwa kweVilla enombono weShimla Hills, Magnificent Snowline, Sanawar & Barog Hills. Kukho iintlobo ngeentlobo zemithi kunye neentaka ezininzi onokuthi uzibone. Asifikeleleki kuphela kwindlela enkulu yenqwelo kodwa sichukumisa indlela ye-khetrapal. Ungahamba uye emarikeni usuka eVilla kwaye ikumgama nje weekhilomitha. I-Ros Common - ihotele ye-hptdc ingumgama ohambahambayo njengeKasauli Castle, i-Kasauli Resorts kunye ne-Regency eqhayisa ngebha yophahla lwe-hangout.
Umbuki zindwendwe ngu- Rachna
Siyakuthanda ukunxibelelana neendwendwe. Kuba ndihlala kwindawo enye ndihlala ndifikeleleka ngelixa ndigcina ubumfihlo beendwendwe. Ndidibana neendwendwe ekufikeni kwaye ndizame ukubazisa malunga neendawo ezahlukeneyo zokutya, ukuhamba, ukuthenga nokunye. Ndihlala ndifowuna xa ndinombuzo okanye ngenye indlela.
Siyakuthanda ukunxibelelana neendwendwe. Kuba ndihlala kwindawo enye ndihlala ndifikeleleka ngelixa ndigcina ubumfihlo beendwendwe. Ndidibana neendwendwe ekufikeni kwaye ndizame uk…